Iifake zamehlo amdaka ama brunettes
Ubuhle bomfazi Iifake Amehlo Brown
Uninzi lweengoma zinikezelwa ngobuhle obuhle bobabhinqa abanamabala abomvu, ngokukodwa ukuba nazo zivuthayo. Ukwenza ngokuchanekileyo kuya kunceda ngokugqithiseleyo ukugxininisa ubuhle bamehlo akho. Kubalulekile ukufumanisa indlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo imfucuza kwi-brunettes e-brown eyamehlo, yiyiphi impawu esetyenziswe kakuhle ukugxininisa ubuhle bamehlo ngaphandle kweengxaki.
Ngokutsho kophando lophando, phantse yonke yesibini yesini esilungileyo kunye namehlo aluhlaza awaziyo ukufaka isicelo sokwenza i-step-by-step ukuze kukhangeleke. Phantse i-75% yamantombazana ikholelwa ukuba kunzima kakhulu ukwenza iifomu kubasetyhini abanamehlo aluhlaza. Kubantu, amehlo abo abantombazana abomdaka abonwa nje kuphela njengesondlo sothando. Kufuneka kuphela ukugqamisa kwaye ugxininise ngokuchanekileyo, kunye nomkhanyo onobuninzi obomdaka nje ukhawuleza nobuhle bakhe phantse nawuphi na!
Masizame ukuphula iingcamango ezikhoyo ezenziwe ngamehlo aluhlaza kunzima kakhulu.
Kukho imigaqo emininzi yokwenza iifom ze-brunettes, ezingenakunyuswa ukuba zinganakwa:
Kubalulekile ukukhetha icebo elifanelekileyo lombala;
Kwakhona kufuneka ukuba ukhethe ngokucophelela indlela yokusebenzisa iifom;
Ngaphambi kokuba wenze isicelo sokwenza iifom, kufuneka ubonise ngokucacileyo okokufunayo ukuba ufumane nalo.
Xa ukhetha iintyatyambo zamantombazana ezinezinwele ezimnyama kunye namabala omdaka, okokuqala kufuneka uqaphele ngokukhethekileyo imibala efana nesiliva, i-lilac, igolide, ibomnyama kunye nomnyama omnyama.
Imigaqo eyisiseko yokwenza izicwangciso yile:
Injongo yentsuku yokumisa kukugxininisa ubuhle bakho bemvelo. Ngoko ke, ama-brunettes enamabala abomdaka kufuneka akhumbule ukuba kufuneka kube ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kweminyango eninzi.
Ukuba sithetha ngokuhlwa kwamanzi, ngoko ke, ngokuqhelekileyo kudla ngokugqithiseleyo kwaye kunokucacisa ngakumbi kunomhla. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ungadluli kwaye wenze ukukhala. Imfihlelo yokukhangela amehlo i-eyelashes ende kunye ne-eyeliner.
Yintoni efunekayo kwibhokhwe yentombazana enamehlo aluhlaza?
Okokuqala kunye nokuphambili - umgca. Ngaphandle kwakhe kwakha i-brunette eyakheke kakhulu iliso. Ngoncedo lwayo, unako ngokufanelekileyo kwaye ngokukhawuleza wenze i-make-up enhle. Ngokwemvelo, amantombazana anamehlo asemdaka afanelekile ukusebenzisa i-eyeliner emnyama.
Kwakhona udinga izithunzi ezifanelekileyo emehlweni akho. Bamele bagxininise ukukhanya kwemvelo kwamehlo akho, ngelixa udibanisa ubunzulu kunye nokufudumala kwiimifanekiso ezimnyama zomfanekiso wakho. Uluhlu lwebala lomnquma lomnquma lulungele kubanikazi bamehlo abuhlaza. Ukuba ulusu lwentombazana luyinto emnyama, unokusebenzisa umthunzi wamehlo obomvu. Kubalulekile ukukhumbula ukuba kuyimfuneko ukugxininisa kuphela imida yangaphandle yamehlo, ukuze ungayigqithisi ngombala. Ukuba ulusu lukhanya, intombazana kufuneka ibeke ingqalelo kwiimpawu ezibandayo xa zikhetha izithunzi (i-fuchsia, i-greenish-marine okanye i-blue blue). Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba imibala ephambili yokubumba kufuneka idibaniswe nombala wamehlo, iinwele, isikhumba kunye nesambatho.
Ungasebenzisi i-shades ye-orange ukuze uyenze uphinde usebenzise i-pink kunye nomhlophe ngokunyamekela. Kulo hlobo olusondeleyo lwe-shades lukhangeleka kakuhle, kodwa ukusuka kude luchukumisa.
Ukuba iinwele zakho azikho mnyama omnyama okanye umnyama, ngoko kwi-arsenal yezilumkiso zakho kufuneka ube yi-mascara. Ukukhanyisa emthunzini weenwele zentombazana enamehlo aluhlaza, kungcono ukukhetha akukho mnyama, kodwa i-mascara emdaka. I-brunette evuthayo idinga inki ebomnyama. Musa ukubeka i-mascara kakhulu. Iifayile zimele zihlukane. Oku kuya kwenza ukuba amehlo abe nomphumo othabisayo. Ukuze u-eyelashes xa usebenzise izidumbu azinamathelani kunye, bangakwazi ukuqala ngepowder.
I-brown brunette yamehlo enqabileyo kufuneka yenziwe ngokunyamekela - oku mhlawumbi umgaqo osisiseko. Ngenxa yokuba amehlo omdaka anikezelwa ngqalelo enkulu, kuyimfuneko ukuba ugweme ngokuthe ngqo ukukhupha kunye nokungahambisani ncamnye nokusetyenziswa kwee-makeup. Ngoko ke, kule meko kuyona nto ibhetele ukuyisebenzisa isinyathelo ngesinyathelo, ukufezekiswa ngempumelelo.
Ulungelelaniso olwenzelwe amehlo aluhlaza
Iimaski zesikhumba esomileyo ebusweni ngezandla zabo
Indlela yokujongana neentlanzi?
Ukujongana nokukhangela iziqhamo ze-acid
Indlela yokunyamekela isikhumba sakho ebusika
Ikhukhamba kunye namakhiwane
Isaladi kunye nolwimi lwengulube, ama-mushroom kunye nemifuno
Indlela yokujamelana neengxaki ngexesha lokukhulelwa?
Indlela yokuphatha izihlangu zesikhumba?
Indlela yokufikelela kwi-orgasm yowesifazane
Ukuba umntu wanikela ngesondo lesithathu
Iipropati ezisebenzayo zengqolowa yengqolowa
Umda wobudala phakathi kwabantwana
Izikhwele kunye nomlingiswa
I-Star Trek: iholide epheleleyo nge-zodiac